Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa cambaareysay rabshadihii dhawaantan ka dhacay Caasimadda Jabuuti.
War-saxaafadeed ay wasaaraddu soo saartay, oo uu kuna saxiixnaa afhayeenka wasaaradda John Kirby, ayaa sidoo kale dowladda Jabuuti loogu yeeray inay si deg deg ah u sii deyso xubnaha mucaaradka ee la xirey.
Kirby, ayaa tacsi u direy ehalladii dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmey weeraradii iyo rabshadihii hareeyay caasimadda Jabuuti maalmo ka hor.
War-sxafedka aya loogu baaqay dowladda Jabuuti inay xushmeyso xaquuqdahadalka ee shacabka Jabuuti iyo golaha iyo ururada nabdeed.
“Waxanu mar kale xaqiijineynaa taageerada aan u heyno wada hadalladan iyo ballan qaadka dowladda Jabuuti ee ku aaddan xoojinta dowladnimo dhameystiran iyo horrumar,” ayaa lagu soo gaba gabeeyay war-saxafadeedka ka soo baxay wasaaradda arimmaha dibbada Marykanka.